सपनामा सेक्स गरेको देख्नु शुभ कि अशुभ ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
सपनामा सेक्स गरेको देख्नु शुभ कि अशुभ ?
सपना सबैले देख्छन् । यो धुव्रसत्य कुरा हो । हाम्रा बुढापाकाले सपनाबारे भन्ने गर्छन्, ‘तिमीले देखेको यो सपना शुभ हो वा यो अशुभ ।’ केही सपना यस्तो देखिन्छ, जो सेक्ससँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यो आफ्नै पति वा पत्नीसँग सेक्स गरिरहेको सपना हुँदैन । कुनै परपुरुष वा परस्त्रीसँग सेक्स गरिरहेको सपना देखिन्छ । यस्तो सपनाको अर्थ के हुन्छ ? के सेक्सको सपनासँग तपाईको कुनै सम्बन्ध छ ? जान्नुहोस्, प्रायजसो सबैले भोग्ने गरेका यी पाँच प्रकारका सेक्स सपनाका अर्थ के हो ?
पूर्व ब्वाइफ्रेण्ड वा गर्लफ्रेण्डसँग: